စက်တင်ဘာ 2017 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
Month: စက်တင်ဘာ 2017
စံနှုန်းမြင့် ၊ အရည်အသွေးပြည့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ ရောင်းချပေးနေသော Centure
စက်တင်ဘာ 16, 2017 နေ့
ရုံးခန်းတစ်ခန်းစဖွင့်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံးနဲ့ အဓိကအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ ရုံးသုံးပရိဘောဂတွေပါပဲ။
ဟိုးယခင်ရုံးတွေမှာတေ့ာ ကျွန်းစားပွဲကြီးတွေ ကြိမ်ကုလားထိုင်ကြီးတွေ အသုံးပြုမှု များခဲ့ပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ သစ်တော့ပြုန်းတီးမှုတွေလည်းတစိတ်တဒေသကကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့လူနေမှုပုံစံခေတ်မှီတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းရွှေ ့တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးခေတ်မှီနည်းပညာများအသုံးပြုထားတဲ့ ရုံးသုံးပရိဘောဂတွေက ကျွန်းစားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်တွေနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်မှီနည်းပညာများအသုံးပြုထားတဲ့ ရုံးသုံးပရိဘောဂတွေဟာသပ်ရပ်လှပတဲ့ဒီဇိုင်း၊ သက်တောင့်သက်သာပိုမိုရရှိဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ရာပြည်တွင်းထုတ်ပရိဘောဂများရှိသကဲ့သို့ ထိုင်း၊တရုတ်၊စင်ကာပူ၊မလေးရှားအစပြု၍ နိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းခေတ်နှင့်အညီတင်သွင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။
Centure office Funitureဟာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာCentureနာမည်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နှင့် ၁၂ ကီလိုမီတာအကွာNonthaburiတွင်တည်ရှိသောစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ပြီး၂၀၁ဝခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ ISO9001-2008ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးယခုအခါ ကြယ်စင်သာကုမ္ပဏီမှတစ်ဦးတည်းတင်သွင်း ပြီးသိမ်ဖြူလမ်းတွင် showroom ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။
Centure office furniture မှ ရုံးသုံးစားပွဲ၊ ကုလားထိုင်မျိုးစုံ၊ အစည်းအဝေးခန်းအတွက်အထူးစားပွဲများ၊ Steel Cabinet များကို Elements နှင့် Zingularဟူ၍အမှတ်တံဆိပ်နှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားရုံတင်မကရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း၊ ခိုင်ခံမှု၊ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှု နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့ကိုအထူးအလေးထားပြီးထုတ်လုပ်ထားရှိပါတယ်။
စားပွဲမျက်နှာပြင်အတွက် ၂၅ မီလီမီတာ Melamine coated Particle Board နှင့် Steel Leg ကို Epoxy powder coated အသုံးပြုထားပြီး Cabinet နှင့် Pedestal အတွက်ကတော့ Double top, ၁၉ မီလီမီတာကိုယ်ထည်နှင့်တပ်ဆင်ထားပြီး Germany နိုင်ငံထုတ် အရည်အသွေးမြင့် Hafeleတံဆိပ် သော့များနှင့် fitting များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပြီးခိုင်ခံ့မှု အပြည့်ရှိသောပရိဘောဂများဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံများအနေနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုဦးစားပေးထားပြီးအထိုင်များသောအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရသူများအတွက် Lumber support ခါးအထောက်အကူ နှင့်ပြုလုပ်ထားသောထိုင်ခုံများကိုခေတ်မှီဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ရုံးခန်းအတွင်းအမြင်တင့်တယ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ရုံးသုံးဆိုဖာဆက်တီမျိုးစုံကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PU , Leather များဖြင့် စိတ်ကြိုက်အရောင်အားမှာယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်အတွက် Powder Coat Steel ဝ.၆ မီလီမီတာ ၊ မှန်သားအနေဖြင့် Clear Glass ၄ မီလီမီတာ နှင့် သော့စနစ်အတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့် Cyberlockကိုအသုံးပြုထားသော Steel Cabinet ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုလည်းရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုများအနေနဲ့ရုံးခန်း Layout ရေးဆွဲပေးခြင်း၊ ရုံးခန်းနှင့်ကိုက်ညီသောပရိဘောဂအရွယ်အစားအလိုက် လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းမှာယူရာတွင်လည်းသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းမှန်ကန်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ရန်ကုန်မြို ့တွင်းအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ပစ္စည်းစနစ်တကျ တပ်ဆင်နေရာချပေးခြင်း၊ ရောင်းချပြီးပစ္စည်းများအတွက် ၁နှစ်အတွင်းအခမဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမကလိုအပ်သည့် အပိုပစ္စည်းများကိုလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးဝယ်ယူအားပေးသူစိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောပရိဘောဂများတွင်ရှိရမဲ့အရည်အချင်းတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားသလိုသတ်မှတ်ထားပြီးCenture မှ ပရိဘောဂများကိုလည်းအဆိုပါ စံနှုန်းများနှင့်အညီရရှိနိုင်စေရန် ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁- အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း (Quality)
၂- ပုံသဏ္ဍန်နှင့်ဒီဇိုင်းလှပခြင်း (Design)
၃- အသုံးဝင်မှု (Function)
၄- လက်ခံနိုင်ခြင်း (Adaptability)
၅- လှပခြင်း (Beauty)
၆- ခိုင်ခန့်ခြင်း (Durability)
၇- ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်း (Maintenance)
၈- ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်း (Safety)
၉- ဈေးနှုန်း (Price)တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေသော Ever Rich Group Co.,LTD.
စက်တင်ဘာ 5, 2017 နေ့
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေသောEver Rich Group Co.,LTD.
Ever Rich Group Co.,ltd အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး Trading လုပ်ငန်းဖြင့် သွပ်လိပ် အမျိုးမျိုးတင်သွင်းကာဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဈေးကွက်အတွင်း Customer တွေရဲ့ အားပေးတောင်းဆိုမှုတွေကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ စက်ရုံလုပ်ငန်းသို့အသွင်ကူးပြောင်းပြီး ယနေ့တိုင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ Customer များနှင့် ထိတွေ့ ရင်းနှီးမှုဖြင့်ရရှိလာသောအတွေ့အကြုံများကို အခြေခံပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေး အစဉ်ကြိုးစား လျက်ရှိပါတယ်။ Ever Rich Group Company Limited စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်း များ၏ အားသာချက်တွေ ကတော့-
၁။ ကုန်ကြမ်းများအား တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်း ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသဖြင့် အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းသင့်လျော်မှန်ကန်မှုရှိခြင်း
၂။ အရည်အသွေးမြင့် Zinc 80 GI Coil သွပ်လိပ်ကုန်ကြမ်းများကိုသာ အသုံးပြုထုတ်လုပ်ခြင်း
၃။ လိုအပ်သော သွပ်လိပ်အကျယ်(Coil Width) အလိုက် Slit Coil များသပ်ရပ်စွာခွဲစိတ်ပေးခြင်း
၄။ ၂လက်မ၊ ၃လက်မ အမြင့် ကြမ်းခင်းပြား (Floor Deck Sheet)များအား ပြောင်လက်တောက်ပ လှပ သေသပ်ခိုင်ခံ့မှုရှိသော ဒီဇိုင်းဖြင့် လိုအပ်သည့် ပေအရှည်အတိုင်း အော်ဒါလက်ခံထုတ်လုပ်ပေးခြင်း။
၅။ စီချန်နယ်(C Channel) ချောင်းများအား လိုအပ်သည့် အရွယ်အစား၊ အထူ၊ ပေအရှည်အတိုင်း အော်ဒါလက်ခံ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း နှင့်
၆။ ဂျီအိုင်ဟော်လို (GI Hollow) ချောင်းများအား လိုအပ်သည့် အရွယ်အစား၊ အထူ၊ အလေးချိန်၊ ပေအရှည်အတိုင်း အော်ဒါလက်ခံထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Ever Rich Group Company Limited မှ ကုန်ပစ္စည်း များကို မှာယူလိုပါက ဖုန်း – ဝ၁ ၉၆၄၀၂၇၇၊ ဝ၁ ၆၁၇၁၄၉၊ ဝ၉ ၅၁၁၆၀၁၁၊ ဝ၉ ၉၆၅၀၈၅၄၅ဝ သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်အမှတ်(၁) – အမှတ် (၃၆၊ဒီ)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဆိုင်အမှတ်(၂) – အမှတ် (၃၆)၊ အခန်း(၉၊၁၀)၊ ကျောက်စိမ်း ၃လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံဝင်း၊ အင်းစိန်မြိုနယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဆိုင်အမှတ်(၃) – အဆောင်(၁၃၀)၊ အခန်း(၄)၊ ရွှေဝါလမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံဝင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
စက်ရုံ – အမှတ် ၄၁၇၊ လှသိဂီ င်္လမ်းနှင့် ကင်းဝန်မင်းကြီးလမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဘားအံမြို့ကိုသွားလည်ရင်း အနားယူနိုင်မယ့် “ Little Hpa An Hostel”
စက်တင်ဘာ 1, 2017 နေ့
ဒီတစ်လမှာတော့ ကျွန်မတို့ Myanmar Home & Decor အဖွဲ့သားတွေက အေးချမ်းလှတဲ့ရိုးသားတဲ့အပြုံးတွေရှိတဲ့ ဘားအံမြို့မှာ အသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအငွေ့အသက်လေးတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့ Black Cub Design Agency ကလုပ်တဲ့ “ Little Hpa An Hostel” လေးအကြောင်း တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Hostel လေးရဲ့အပြင်အဆင်က စစဦးဆုံးအထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တင်ဆွဲဆောင်မူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နံရံလေးတွေ မှာဆိုရင် မြန်မာ့ရိုးရာလက်မူပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ချစ်စရာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ ထိုင်ခုံလေးတွေကအစ ကြိမ်ထိုင်ခုံ တွေကိုအသုံးပြုထားတာက အမြင်ဆန်းစေပါတယ်။ မျက်နှာကျက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖိုးဝရုပ်လေးတွေနဲ့ ပြုလုပ် ထားတဲ့မီးဆိုင်းတွေ၊ နောက် အဲ့ဒီမီးဆိုင်းကြီးတွေကို ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ပစ်တိုင်းထောင်မျက်နှာလေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ နံရံ တွေမှာဆိုရင်လည်း မြန်မာ့ဓလေ့ကိုပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို မြင်နေရတာကလည်း ကြည်နှူးစရာအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကာလာ(အရောင်)တွေကိုလည်း များများစားစားမသုံးထားပဲ အဝါ၊ အနက်နဲ့ အဖြူရောင်ကိုပဲ လိုက်ဖက်အောင် အသုံးပြုထားတာ ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဆိုင်လေးရဲ့အပြင်အဆင်ကိုတော့ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး မြန့်မာရိုးရာအငွေ့အသက်လေးတွေ ကို လာရောက်တည်းခိုသူတွေ ခံစားနိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုထူးခြားတဲ့အပြင်အဆင်လေးတွေကို ကြည့်လိုုက်တာနဲ့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူရဲ့စေတနာတွေကို Myanmar Home & Décor Magazine ရဲ ့ပရိတ်သတ်ကြီး ခံစားမိစေမှာပါအသေအချာပါပဲ။ ဓါတ်ပုံများပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Little Hpa An Hostel ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။